James Swan oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka | KEYDMEDIA ONLINE
James Swan oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka
Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan, ayaa sheegay in la joogo xilligii ay madaxda Soomaaliyeed is hor fariisan lahaayeen, si loo hir galiyo doorasho la isla ogolyahay oo dalka ka dhacada.
MUQDISHO, Soomaaliya – James Swan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay lama huraan tahay in la laga heshiiyo is mari waaga siyaasadeed ee la xariira doorashooyinka ee soo jiitamayay ku dhawaad muddo hal sano ah.
Ergeyga Qaramada Midoobay wuxuu sheegay in ay kalsooni ku qabaan, Madaxda iyo Siyaasiyiinta oo idil in ay heshiis dhab ah ku gaari doonaan shirka uu isagu qaban qaabiyay ee dhawaan la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho.
James Swan, wuxuu xusay in shirka wada-tashiga qaran uu ka dhaco goob ammaan, tasiilaadka ku baxayana ay bixinayaan beesha caalamka.
Wuxuu ku nuux-nuuxsaday muhiimadda ay leedahay hirgalinta heshiiskii 17-kii September 2020, arrimaha doorashooyinka looga gaaray magaalada Muqdisho.
Ergeyga Qaramada Midoobay, wuxuu caddeeyay in hoggaamiyaasha Soomaalida aysan isku kalsooneyn , wuxuuse ka digay in dalka dib loogu celiyo qalalaaso iyo dagaallo sokeeye.
Rabshadihii dhacay 19-kii Feberaayo, ayuu sheegay in ay walaac ka muujiyeen, wuxuuna hoosta ka xariiqay in ay diiwaan gali doonaan dhacdo kasta oo taas la mid ah, kalana hadlayaan dadka ay quseyso.